FAQ Manamboatra PCB:
Inona no ataon'ny PCBFuture?
PCBFuture dia mpanamboatra matihanina manerantany manome fanamboarana PCB, fivoriambe PCB ary serivisy fitadiavana singa.
Karazana tabilao PCB inona no amboarinao?
PCBFuture dia afaka mamokatra karazana PCB marobe toy ny PCB tokana / roa sosona, PCB multilayer, PCB henjana, PCB malefaka ary PCB henjana.
Manana habetsahan'ny kaomandy farafahakeliny (MOQ) amin'ny baiko PCB ve ianao?
Tsia, ny MOQ ho an'ny famokarana PCB dia singa 1.
Manome santionany PCB maimaim-poana ve ianao?
Eny, manome santionany PCB maimaim-poana izahay, ary ny qty dia tsy mihoatra ny 5 pcs. Saingy mila mampandoa ny santionany aloha izahay, ary mamerina ny vidin'ny santionany PCB amin'ny famokarana betsaka raha toa ka tsy mihoatra ny 1% ny sandan'ny famoahana santionany (Tsy ao anatin'izany ny entana).
Ahoana no ahafahako mahazo teny nalaina haingana?
Azonao atao ny mandefa ny rakitra any amin'ny varotra mailaka anay @ pcbfuture ho an'ny teny nindramina, afaka mitanisa aminao izahay ao anatin'ny 12 ora ara-dalàna, haingana indrindra dia afaka 30 minitra.
Azoko atao ve ny manamboatra ireo takelaka amin'ny takelaka?
Eny, afaka miara-miasa amin'ireo rakitra PCB tokana izahay ary manamboatra takelaka amin'ny takelaka.
Azoko atao ve ny mametraka ny baiko PCB miboridana?
Eny, afaka manome amin'ny serivisy fanodinana PCB ho an'ny mpanjifantsika ihany izahay.
Fa maninona no ampiasainao ny serivisy manonona an-tserasera
Ny fitanisana an-tserasera PCB dia miasa fotsiny amin'ny vidiny mirary sy ny fotoana itarihana, manadihady izahay amin'ny famokarana PCB avo lenta, noho izany dia zava-dehibe ny fizahana DFM amin'ny antsipiriany sy ny marina. Izahay dia manizingizina ny fampifangaroana ny milina sy ny asa tanana mba hampihenana ny risika famoronana ho an'ny mpanjifa.
Ahoana ny fanisana ny fotoana itarihana ny famokarana PCB?
Ny fotoana fitarihana baiko PCB dia isaina aorian'ny famahana ny EQ rehetra amin'ny famoronana PCB. Ho an'ny kaomandy fihodinana mahazatra dia isaina ho toy ny andro voalohany ny andro fiasana manaraka.
Manana ny DFM manamarina ny volavolainay ve ianao?
Eny, afaka manome serivisy DFM maimaim-poana izahay ho an'ny baiko rehetra.
Fanontaniana momba ny fivorian'ny PCB Turnkey:
Manome fivoriambe PCB prototype (volume ambany) ve ianao?
Eny, afaka manome serivisy prototype PCB turnkey izahay ary ny MOQ dia ampahany 1.
Inona avy ireo rakitra ilainao amin'ny baiko fivorian'ny PCB?
Raha ny mahazatra, azonay atao ny manonona ny vidiny aminao miorina amin'ny fisie Gerber sy ny lisitra BOM. Raha azo atao, makà ary apetraho ireo rakitra, sary fanaovana fivoriambe, fitakiana manokana ary torolalana tsara kokoa mba hiarahabana antsika koa.
Manome serivisy fivoriambe PCB prototype maimaim-poana ve ianao?
Eny, manome serivisy fivoriambe PCB prototype maimaim-poana izahay, ary ny qty dia tsy mihoatra ny 3 pcs. Saingy mila mampandoa ny santionany aloha izahay, ary mamerina ny vidin'ny santionany PCB amin'ny famokarana betsaka raha toa ka tsy mihoatra ny 1% ny sandan'ny famoahana santionany (Tsy ao anatin'izany ny entana).
Inona ny rakitra Pick and Place (rakitra Centroid)?
ny fisie sy ny fisie dia antsoina koa hoe rakitra Centroid. Ity angon-drakitra ity, ao anatin'izany ny X, Y, ny fihodinana, ny sisin'ny tabilao (na ny lafiny ilany ambany) ary ny mpanondro mpanondro, dia azon'ny SMT na ny milina fivorian'ny bolongana.
Manome serivisy fivoriambe PCB turnkey ve ianao?
Eny, manome serivisy fivoriambe PCB turnkey izahay, izay misy ny famokarana tabilao Circuit, Sourcing Components, Stencil, ary PCB Mponina sy fitsapana.
Fa maninona ny sasany amin'ireo singa mivoaka avy aminao no avo kokoa noho ireo raha novidianay?
Ireo singa elektronika nafarana tany Sina dia tsy maintsy nanampy VAT 13% ary ny sasany amin'izy ireo dia tokony ampangaina amin'ny Tariff, izay tsy mitovy amin'ny kaody HS isaky ny faritra.
Fa maninona ny sasany amin'ireo singa mivoaka avy aminao no ambany noho ny vidiny aseho amin'ny tranokala mpaninjara?
Miara-miasa amin'ireo mpaninjara malaza marobe toa ny Digi-Key, Mouse, Arrow sns sns izahay, satria ny sandan'ny fividiananay isan-taona dia manome fihenam-bidy ambany kokoa izy ireo.
Mandra-pahoviana no mila mitanisa ireo tetikasa Turnkey PCB ianao?
Amin'ny ankapobeny dia maharitra 1-2 andro fiasana ny fahaizanay mitanisa ireo tetikasa fivoriambe. Raha tsy nahazo ny teny nindraminay ianao dia azonao atao ny manamarina ny boaty mailakao sy ny folder jun raha misy mailaka nalefa taminay. Raha tsy misy mailaka alefanay, mifandraisa indroa sales sales@pcbfuture.com raha mila fanampiana.
Azonao antoka ve ny kalitaon'ny singa ho an'ny PCB?
Nandritra ny taona maro niainany, PCBFuture dia nanangana fantsom-pifandraisana azo antoka amin'ireo mpizara na mpanamboatra fanta-daza manerantany. Afaka mahazo fanohanana tsara indrindra sy vidiny tsara amin'izy ireo isika. Ankoatr'izay, manana ekipa fanaraha-maso kalitao izahay handinika sy hanamarina ny kalitaon'ny singa. Afaka miala sasatra amin'ny kalitaon'ny singa ianao.
Afaka manana kaonty momba ny trosa ve aho?
Ho an'ireo mpanjifa maharitra izay miara-miasa aminay mihoatra ny enim-bolana ary miaraka amina baiko matetika isam-bolana, dia manolotra kaonty indram-bola misy fe-potoana fandoavana 30 andro izahay. Raha mila tsipiriany bebe kokoa sy fanamafisana, mifandraisa aminay ary hiverina haingana aminao izahay.